“ မိဘစော်ကား ဒဏ်(၁၀)ပါး” - Myanmarload
“ မိဘစော်ကား ဒဏ်(၁၀)ပါး”
လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ် က 11:29 August 20, 2017
မိဘမေတ္တာကို ကျေးဇူးတရားကို ရှေးက စာဆိုပညာရှိတွေတောင် စာဖွဲ့မမှီနိုင်ကြပါဘူး။
လောကမှာ အချိန်လွန်မှ ပြန်မရတာ အချိန်နဲ့ မိဘ ပဲရှိပါတယ်။ မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သားသမီးဟာ ဘယ်တော့မှဒုက္ခ မရောက်နိုင်ပဲ လက်ရှိဘဝမှာရော နောင်သံရာဘဝများမှာပါ ကောင်းသောအကျိုးကို ခံစားရသလို မိဘအား ပြစ်မှားစော်ကားမိလျှင် လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘဝတွင်သာမက နောင်သံသရာဘဝများထိ အပြစ်ရတတ်ပါတယ်။ မိဘစော်ကားပြစ်မှားမိ၍ ဆိုးကျိုးများကိုခံစားရသော ဘုရင် အဇာသသတ်အပါအဝင် ရှေးက သာဓက များစွာရှိပါတယ်။
အခုလက်ရှိဘဝမှာ ပြစ်မှားမိလျှင် ..
၁. ကြမ်းကြုတ်သော ဝေဒနာ ခံစားရခြင်း။
၇. မိဘ၊ သားသမီး၊ ဇနီး မယားများ၊ ဆွေမျိုးများ ပျက်ဆီးခြင်း။
၉. နေအိမ်စသည့် မီးလောင်ခြင်း။
၁၀. ငရဲကျခြင်း၊ တို့ ခံစားရတတ်ပါတယ်။
သားသမီးတစ်ယောက်ဘဝမှာ မိဘဆိုတဲ့ အရိပ်ပေးတဲ့သစ်ပင်ကို မြေသြဇာမကျွေးနိုင်ရင်နေပါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နွယ်ပတ်ပြီးအပင်သေစေနိုင်တဲ့ ကျီးပေါင်းပင်ဘဝမျိုး မဖြစ်အောင်တော့ နေသင့်ပါတယ်။ မိဘကို နှုတ်နှင့်ဖြစ်စေ၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြစ်မှားမိပါက
Page generated in 0.2551 seconds with5database query and6memcached query.